Wax ka beddelka Dacwadaha Post ee WordPress loogu talagalay SEO | Martech Zone
Mararka aad sameyso cilmi baarista ereyga muhiimka ah goorma baloog loogu talagalay hagaajinta mashiinka raadinta, Waxaa laga yaabaa inaad ogaato in tiro badan oo ka mid ah baarayaashu ay si qaldan u higaadiyaan ama u wadaagaan ereyo. Tusaale ahaan wuxuu noqon karaa USS Forrestal iyo lid USS Hore.
Soo bandhigida natiijooyinka raadinta erayada qalad loo higgaadiyay waa xeelad si fiican u shaqeysa… laakiin waxaa laga yaabaa inaadan rabin inaad si badheedh ah u si khaldan u-higaadin erey cinwaankaaga boostada ama mawduucaaga. Marwalba, qof ayaa tilmaami doona qalad kuu baxay!
Halkii aad u muuqan lahayd xishood, ka faa'iideyso meelaha kale ee ku jira mawduucaaga si ula kac ah u khaldo ereyga:
Your Slugga Boostada (fiidiyowga hoose)
Mawduucyada cinwaannada ee tags-yada (links).
Tilmaamaha cinwaanka ama sharraxaadda ee sawirrada dhexdooda.
Waa kan muuqaal kooban oo ku saabsan sida wax looga beddelo slug-gaaga boostada ee WordPress. HA SAMEYN tan ka dib markaad daabacdo boostada blog, in kastoo! Intaad qoreyso qoraalkaaga, waxaad si fudud ugu cusbooneysiin kartaa boostadaada si dhib yar:
Tags: tayadoodiiPermalinkdhajinta slugslugWordPresswordpress permalink
Maxaan u jeclaan waayey Facebook
Waxay u egtahay in Camtasia ay leedahay awood badan. Miyaad iibsatay softiweerka, mise waxaad tijaabineysaa tijaabo?
Sep 2, 2009 at 12: 42 PM
Si xiiso leh, uma muuqato mid adag sida 'studio' nooca 'Windows'. Laakiin waa wax iska caadi ah in la isticmaalo! Interface wuxuu ku daydaa iMovie si weyn. Waxaan soo iibsaday xilligii ay soo baxday. Waxaan isticmaali jiray Snap X Pro laakiin waxay dhahday rukunka ayaa iga dhamaaday… Ma aanan ogeyn ahaa rukumo! Tani way ka sii fiican tahay.